‘हेलो सरकार ! २ करोड देउ त म पनि सगरमाथा चढ्छु !’ - MeroReport
‘हेलो सरकार ! २ करोड देउ त म पनि सगरमाथा चढ्छु !’
Posted by Shiva Adhikari on March 18, 2012 at 11:30am
मैले आफ्नो जीवनमा देखेको र बुझेको सबैभन्दा उदार सरकार भनेकै वर्तमान सरकार हो । जसले जसरी, जहाँबाट र जे गरेर जे–जे मागे पनि त्यो तत्काल दिई हाल्ने वर्तमान सरकार भन्दा उत्तम सायद यो जुनीमा अर्को सरकार देखिएला ! तर, यसको लागि थोरै कसरत भने गर्नैपर्छ । नेपथ्यबाट कसैले मलजल भने गरिदिनै पर्छ–केही प्राप्त गर्नको लागि । जनताका गुनासा सुन्न खप्पिस प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले क्षतिपूर्ति, राहत, उपचार, सम्मानका नाममा करोडौं रकम सरकारी ढुकुटीबाट वितरण गर्न कुनै कन्जुस्याईं गरेका छैनन् । जो माग्न प्रधानमन्त्रीको दैलोसम्म पुगे, उसले यथेष्ट सहयोग पाएकै छन्–वर्तमान सरकारबाट । मधेसी नेताले मागेकै भरमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले ४९ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डल त दिए–राष्ट्रलाई । अरुको के कुरा ?
हालै सरकारले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपुत्र प्रकाश दाहाललाई सगरमाथा चढ्न २ करोड रुपैयाँ सहयोग दिने निर्णय गरेर उदार कार्य गरेको छ । ‘मितब्ययी’ प्रधानमन्त्री भट्टराईले छोरा प्रकाशलाई रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरेर बाबु (प्रचण्ड) प्रति मितब्ययी भएको ब्यबहार भने खुलेरै देखाए । सगरमाथा चढ्न सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ–अन्यको हकमा । प्रकाशको हकमा भने सरकारले नै रकम तिर्ने वातावरण निर्माण गरेर ‘कालीदासिय’ ब्यबहार देखाइदिए–प्रधानमन्त्री भट्टराईले । यो कुरा प्रष्टै छ कि–प्रकाशले ‘प्रकाश’ वा ‘माओवादी कार्यकर्ता’ भएर सगरमाथा चढ्न रकम सहयोग पाएका पक्कै होइनन् । प्रचण्डपुत्र भएकै नाताले सरकारले उनलाई रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेको हो ।
यसको पनि अर्थ छ । प्रधानमन्त्री भट्टराई पार्टीपंक्तिभित्र एउटा गुटको असहयोग र आलोचनाको कारण अप्ठ्यारोमा छन् । पार्टी उपाध्यक्ष मोहन बैद्यपक्षधरले माग्दै आएको राजीनामासम्मको मागले भट्टराईलाई भित्रभित्रै पिरोलेको छैन भन्न सकिन्न । यस मेसोमा भट्टराई अध्यक्ष प्रचण्डलाई ‘चिढ्याएर’ अघि बढ्न सक्दैनन् । बरु, बाहिर इज्जत फुलाएरै हिड्न भएपनि प्रचण्डको प्रस्तावलाई ‘खुसुखुसु’ सर्मथन गर्नुको विकल्प ‘बौद्धिक’ प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग छँदै छैन–भन्ने प्रशस्त आधारहरु पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीतिले उजागर गर्दै आएको छ ।
प्रचण्डले पनि भट्टराईलाई अचानो बनाएको प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न ‘छेपारे’ चरित्र देखाउँदै आएका प्रचण्डले भट्टराईलाई ‘ढाल’ बनाएर तरबार चलाई रहेको जनताले बुझेकै कुरा हो । नत्र, एउटा पार्टीपंक्तिको ११ जना व्यक्तिहरु सगरमाथा चढ्न जाँदा राष्ट्रले सहयोग गर्नुपर्ने किन ?, राष्ट्रको ढुकुटी रित्याएर कुन चाँही ‘महान्’ मानिसको जयजयकार गर्दैछौं–हामी ? दैनिक ज्याला–मजदुरी, सानोतिनो ब्यापार, व्यवसाय गरेर कमाएको पैसाबाट जनताले तिरेको करको रकम किन एक व्यक्तिको निजी कार्यमा घोप्ट्याईंदै छ ?, प्रकाशले सगरमाथा चढेर जनतालाई के हुन्छ ?, नचढे के हुन्छ ?, को हुन्–प्रकाश ? अझ आफूले सगरमाथा चढेर शान्ति र संविधान आउँछ भन्ने प्रकाशको हावादारी गफले भने सर्वसाधारणको कन्सिरीको रौं नै समेत तताईदियो । विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा सर्वसाधारणले स्वस्फूर्त रुपमा भनिदिए–प्रकाशले सगरमाथा चढेर नयाँ संविधान आउने भए, ६ सय १ जनाको के काम ?
यहाँनेर उठाउनै पर्ने एउटा कुरा के हो भने, पर्यटन मन्त्रालयका एक हाकिमले सगरमाथा चढ्न जाने नेपाली टोलीलाई रकम सहयोग गर्नु नौलो कुरा नभएको बताएका छन् । (हेर्नुहोस्–चैत्र ४ गतेको राजधानी दैनिक) उनले यसअघि पनि सगरमाथा चढ्ने नेपाली टोलीलाई रकम सहयोग गरेको बताएका छन् । ती हाकिमले यसअघि ‘निजामती कर्मचारीको टोली’ र ‘महिला टोली’लाई पनि सरकारले सगरमाथा चढ्न आर्थिक सहयोग गरेको उल्लेख गरेका छन् । तथापी उनले यसपटक दिन लागेको २ करोड रुपैयाँ रकम भने अहिलैसम्मकै उच्च भएको खुलाएका छन् । यसअघि सरकारले दिएको भनिएको सहयोग रकम सम्भवतः ‘विशेष’ आरोहण दलका नाममा थियो । तर, अहिले प्रकाशको विषय भने फरका छ–न उनी विशेष आरोहण दलका हुन्, न त कुनै विशिष्ट कार्य गर्ने विशिष्ट व्यक्ति नै ।
विभिन्न स्रोतको माध्यमबाट बाहिर आएका तथ्यहरुले भनेझैं प्रचण्डपुत्र प्रकाशको सगरमाथा भ्रमण दललाई आर्थिक सहयोग गर्न लगातार दबाब आएको थियो । ३ महिना अघिदेखि आएको चर्को दबाबका बाबजुद अर्थमन्त्रालय प्रकाशको आरोहण दललाई रकम दिन ‘बाध्य’ भएको हो । यसरी बाध्य पार्ने शक्ति कुन हो ? स्पष्टै छ–सर्वहारावर्गको आफ्नै पार्टी एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । यसैबीच यस विषयमा विभिन्न तह र तप्काबाट विभिन्न विरोधका स्वरहरु गुञ्जिन थालेका छन् । प्रचण्डले आफ्ना पुत्र प्रकाशलाई अर्को ‘पारस’ बनाउन लागे भनेर विरोध गर्नेहरु सतहमै उदाएका छन् । यो अनौठो कुरा पनि होइन । त्यस्तै विभिन्न क्षेत्रबाट प्रकाशको भ्रमण दललाई रकम उपलब्ध गराउने निर्णय विरुद्ध चर्को विरोधका स्वरहरु उठेपछि आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट समेत ‘डिएक्टीभेट’ गरेका प्रकाशले चैत्र ५ गते सार्वजनिक रुपमै सरकारको उक्त सहयोग रकम नलिने घोषणा गर्न बाध्य भएका छन् ।
बार्षिक ३ सय डलर प्रतिव्यक्ति आय भएका नेपाली जनता । कतिपय सर्वसाधारणको घरमा दैनिक चुलो जल्न धौ–धौ पर्ने अवस्था छ । त्यही सामान्य जनताको नेतृत्वकर्ताको हैसियतधारी वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीको ब्यबहार भने विकसित मुलुकका प्रधानमन्त्रीकाझैं बन्दै गइरहेको छ । जनताकै स्तरबृद्धि र राष्ट्रकै स्वरुप परिवर्तन गर्न बन्न लागेको भनिएको नयाँ संविधान पनि कसैले ‘दिने’ हैसियत राखेनन् । जनताले सस्तोमा रासन, ग्याँस, मट्टितेल, पेट्रोल देउ भन्दा सरकारले सुनेन । बरु, जनताले पनि– ‘सरकार म पनि सगरमाथा चढ्छु, २ करोड देउ’ भन्ने पो हो कि ! त्यति भन्दैमा कथंकदाचित रकम पाइहालियो भने.............................................................।
Comment by Ajeeta Sigdel on March 19, 2012 at 12:55pm
Very nice Shiva ji.